छोराको आसमा छोरी जन्मँदा आमा बेहोस, बाउ ‘धुरुधुरु’ रोए | Seto Khabar
छोराको आसमा छोरी जन्मँदा आमा बेहोस, बाउ ‘धुरुधुरु’ रोए
बैतडी, जेठ ३१—सिगास गाउपालिका–१ टकौरेकी विमला भुल सुत्केरी व्यथा लागेर गाजरी स्वास्थ्यचौकी आइन् । शुक्रबार राति १० बजे अनमी गोदावरी ढाटले सुत्केरी गराउने तयारी गरिन् । उनका श्रीमान्सहित आफन्तबाहिर प्रतीक्षामा थिए । अनमीले छोरी जन्मेको सुनाउनेबित्तिकै विमला बेडमै बेहोस भइन् । श्रीमान् जीतबहादुर भुल छेउमा गएर ‘धुरुधुरु’ रुन थाले ।
२६ वर्षीया विमला छैटौं सन्तान पनि छोरी जन्मिएको सुन्दा बेहोस भएकी थिइन् । उनकी जेठी छोरी ९ वर्ष पुगिन् । राति संयोगले स्वास्थ्यचौकीमै बास बसेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. गुणराज अवस्थी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक आचार्यले बेहोस भएको खबर पाएपछि सोचमग्न भए । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले सम्झाएपछि श्रीमान् रुन रोकिए । विमलालाई एक घण्टापछि होस आयो ।
छोराको आसमा उनले ज्यान जोखिममा राखेर छैटौं पटक गर्भधारण गरेकी थिइन् । बैतडीमा छोराको आसमा बढी सन्तान जन्माउने धेरै छन् । अन्य क्षेत्रको तुलनामा च्वागढ र डिलासैनीमा छोरा नभई नहुने मान्यता छ । धार्मिक अन्धविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा र दबाबका कारण छोराको आसमा बर्सेनि गर्भधारण गर्ने तथा कतिपयले बहुविवाहसमेत गर्दै आएका छन् ।
२३ वर्षदेखि स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अनमी ढाटका अनुसार छोरा नजन्मेसम्म गर्भधारण गर्ने महिलाको संख्या अत्यधिक छ । ‘कसैले ४/५ सन्तानसम्म छोरा नभए अर्को बिहे गर्छन्, कतिले छोराको आसमा १३/१४ सन्तान जन्माएका पनि छन्,’ ढाटले भनिन्, ‘सातरआठ पटक गर्भधारण गर्नु यो क्षेत्रमा सामान्य जस्तै छ ।’
बालविवाह गर्ने र बढी सन्तान जन्माउने महिलाको स्वास्थ्य नाजुक देखिन्छ । छोरी मात्रै जन्माएको भन्दै धेरै महिला घरपरिवारबाट बहुविवाहलगायत शारीरिक र मानसिक हिंसा सहन बाध्य छन् । सानै उमेरमा गर्भवती भएका, गर्भान्तर नराखेका, धेरै सन्तान भएका परिवारका बालवालिका कुपोषित हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । छोरीलाई पालनपोषण र शिक्षामा समेत विभेद हुने गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य जाँचमा चासो नदिने, छोरीलाई विद्यालय नपठाउने र बालविवाह गर्ने समस्या विद्यमान रहेको गाजरी स्वास्थ्यचौकी प्रमुख सिअहेव जनकसिंह धामीले बताए ।
खाद्यान्न उत्पादन कम हुने र वैकल्पिक आयस्रोत नहुँदा पालनपोषणको बोझले यहाँका परिवारमा आर्थिक संकट बढदो छ । प्रायस् घरमा पुरुषहरू वर्ष दिनमा फर्कने गरी कामको खोजीमा भारततिर जान्छन् । महिलाहरू बालबालिकाको स्याहार खेतीपाती, गाईबस्तु, घरायसी बोझले उमेर नहुँदै वृद्धावस्था जस्तो देखिने धामीले बताए ।
‘१३/१४ वर्षमै विहे हुन्छ र त्यही बेलादेखि महिलाहरू गर्भवती हुन्छन्,’ धामीले भने, ‘हरेक वर्ष गर्भवती हुने र पोषणयुक्त खानाको कमी तथा कार्यबोझ बढी हुँदा स्वास्थ्य कमजोर भएको हो ।’
भौगोलिक विकटता, चेतनाको कमी र कामको बोझका कारण धेरैजसोले गर्भावस्थामा स्याहार पाउन सक्दैनन् । गर्भ जाँच र प्रसूति सेवा सहज गर्न पछिल्लो समय स्वास्थ्य कार्यालयले बस्ती हेरेर सुरक्षित प्रसूति केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको संख्या थपेको छ ।
‘गाउँबाट स्वास्थ्यचौकी जान दिनभर हिँडेर मुस्किलले पुगिने गाउँ छन्,’ जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. अवस्थीले भने, ‘अहिलेको एउटा वडामा ३र४ ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सके सबैको पहुँच बनाउन सकिन्छ’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।